Umgaqo-nkqubo we-YONWAYTECH we-LED obonisa iwaranti-yaseShenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
YONWAYTECH I-LED Yokubonisa Umgaqo-nkqubo Wewaranti
YONWAYTECH I-LED yokubonisa iwaranti yomgaqo-nkqubo:
1; Ubungakanani bewaranti
Lo Mgaqo-nkqubo weWarranty usebenza kwiimveliso zokubonisa ze-LED (emva koku zibizwa ngokuba “ziiMveliso”) ezithengwe ngqo kwa-Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd. (ekuthiwa apha emva kwexesha njenge- “Yonwaytech”) nangexesha leWarranty.
Naziphi na iimveliso ezingathengwanga ngokuthe ngqo kwiYonwaytech azisebenzi kulo Mgaqo-nkqubo wewaranti.
2; Ixesha lewaranti
Ixesha lewaranti liya kuba ngokuhambelana nekhontrakthi ethile yokuthengisa okanye i-PI egunyazisiweyo. Nceda uqinisekise ukuba ikhadi lewaranti okanye amanye amaxwebhu asemthethweni agcinwe ngendlela ekhuselekileyo.
3; Inkonzo yesiqinisekiso
Iimveliso ziya kufakelwa kwaye zisetyenziswe ngokungqinelanayo ngokungqinelana neMiyalelo yeZifakelo kunye neziLumkiso zoSetyenziso ezichazwe kwincwadi yemveliso. Ukuba iiMveliso zineziphene zomgangatho, izixhobo kunye nemveliso ngexesha lokusetyenziswa kwesiqhelo, iYonwaytech ibonelela ngenkonzo yewaranti yeeMveliso eziphantsi kwalo Mgaqo-nkqubo wewaranti.
4; Iindidi zeNkonzo yesiQinisekiso
4.1 Inkonzo yokuSimahla ekuSimahla kwi-Intanethi
Isikhokelo sobuchwephesha esikude esinikezelwa ngezixhobo zemiyalezo ekhawulezileyo ezinje ngomnxeba, imeyile, kunye nezinye iindlela zokunceda ukusombulula iingxaki ezilula neziqhelekileyo zobuchwephesha. Le nkonzo isebenza kwiingxaki zobuchwephesha kubandakanywa kodwa kungaphelelwanga kwimicimbi yoqhagamshelo lwentambo yesiginali kunye nentambo yamandla, inkqubo yesoftware yokusetyenziswa kwesoftware kunye nokuseta kweparameter, kunye nokukhutshelwa kwemodyuli, unikezelo lwamandla, ikhadi lenkqubo, njl.
4.2 Buyela kwiNkonzo yokuLungisa iMizi-mveliso
a) Ngeengxaki zeMveliso ezingasombululekiyo ngenkonzo ekude kwi-Intanethi, iYonwaytech iyakuqinisekisa kunye nabathengi ukubonelela ukubuyela kwinkonzo yokulungisa umzi-mveliso.
b) Ukuba inkonzo yokulungisa ifektri iyafuneka, umthengi uya kuthwala imithwalo, i-inshurensi, irhafu kunye nokuvunywa kokungeniswa kweempahla ezibuyisiweyo okanye iinxalenye kwisikhululo senkonzo saseYonwaytech. Kwaye uYonwaytech uyakuthumela iimveliso ezilungisiweyo okanye iinxalenye kumthengi kwaye athwale kuphela indlela.
c) IYonwaytech iyakwala ukubuyisa okungagunyaziswanga ngentlawulo xa ifika kwaye ayizukubekwa tyala ngalo naluphi na uluhlu lweerhafu kunye nemirhumo yokukhutshwa kwesiqhelo. I-Yonwaytech ayizukubekwa tyala ngazo naziphi na iziphene, umonakalo kunye nelahleko yeemveliso ezilungisiweyo okanye iinxalenye ngenxa yokuhamba okanye iphakheji engafanelekanga
4.3 Ukubonelela ngeeNkonzo zeNjineli ezikule ndawo
a) Ukuba kukho umba osemgangathweni obangelwe yimveliso uqobo, kwaye uYonwaytech ukholelwa ukuba imeko iyimfuneko, inkonzo yenjineli yesiza iya kubonelelwa.
b) Kule meko, umthengi uya kubonelela ngengxelo yesiphoso kuYonwaytech yesicelo seenkonzo zesiza. Umxholo wengxelo yesiphoso uya kubandakanya kodwa ungaphelelanga kwiifoto, iividiyo, inani leziphene, njl.njl., Ukwenza ukuba iYonwaytech ikwazi ukugweba ityala. Ukuba ingxaki esemgangathweni ayigutyungelwanga ngulo Mgaqo-nkqubo weWaranti emva kophando lwesiza senjineli yaseYonwaytech, umthengi uya kuhlawula iindleko zokuhamba kunye neefizi zeenkonzo zobugcisa njengekhontrakthi yentengiso okanye iPI egunyazisiweyo.
c) Indawo ezinesiphako endaweni yeenjineli zesiza seYonwaytech ziya kuba yipropathi yaseYonwaytech.